से,क्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? यस्तो छ कारण – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/से,क्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? यस्तो छ कारण
शा’री’रिक स’म्ब’न्धको विषयमा नेपाली समाजले अझै पनि लु’किछिपी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ। शा’री’रिक स’म्ब’न्धको कुरा अलि अपच हुने हुँदा यसका विषयमा चर्चा र चासो कम देखाउने गरिन्छ। तर पनि लुकिछिपी सबैले यस तर्फ ध्यान दिएकै हुन्छन्।
त्यसैले शा’री’रिक स’म्ब’न्धको विषयमा खुल्लारुपमा चि,न्तन कम हुने गरेको छ। यो सबलाई थाहा छ कि, शा’री’रिक स’म्ब’न्धले बैबाहिक जीवनलाई सुखद र आनन्दमय बनाउँछ।
शा’री’रिक स’म्ब’न्ध शारी,रिक सुखका लागि मात्र नभएर यसले मा,नसिक स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वैवाहिक जीवनलाई सुखद र रोमाञ्चक बनाउन तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई यो विश्वास दिलाउन जरुरी छ कि, तपाईं से,क्समा आनन्द लिइरहनु भएको छ।
शा’री’रिक स’म्ब’न्धको दौरान जब महिलालाई च,र,म सुखको अनुभुति हुन्छ उनीहरुको मुखबाट आफैं आनन्दका स्वरहरु सुनिन थाल्छन्। यसले पुरुषले थाहा पाउन सक्छन् कि उनले से,क्सबाट भरपुर आनन्द लिइरहेकी छिन् भन्ने।
ब्रिटेनका शोधकर्ताहरूको एक सोधमा ‘२५ प्रतिशत महिला शा’री’रिक स’म्ब’न्धको क्रममा आवाज निकालेर च,र,म आ,नन्द लिएको’ अभिनय गर्ने खुलासा गरेका छन्। अध्ययन अनुसार शा’री’रिक स’म्ब’न्ध गर्दा महिलाहरू कराउनु भनेको चरम सन्तुष्ट पाउनु हो।
शोधका अनुसार महिलाहरू शा’री’रिक स’म्ब’न्ध गरिरहेको बेला आह उह जस्ता आवाज यसकारण निकाल्छन् कि, जसले पुरुष साथीलाई उ,त्ते,जि,त गर्न सकोस्। शोधकर्ताले १८ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका ७१ महिलामा यस्तो शोध गरेका थिए।
जसमा अधिकांश महिलाहरू शा’री’रिक स’म्ब’न्ध बाट चरम आनन्द लिन नपाएको उक्त सोधमा उल्लेख छ। ९० प्रतिशत महिलाहरूले आफूहरू च,रम आ,नन्द,सम्म नपुगेको बताएका थिए।
८७ प्रतिशत महिलाहरूले चाँहि आफ्नो पार्टनरप्रति प्रेम सम्बन्धसुमधुर राख्नकै लागि यसरी आवाज निकाल्ने गरेको खुलाए। महिलामा आ,र्ग,ज्म अधिकांशः फो,र प्ले,को क्रममा धेरै देखिने गरिन्छ।
यस क्रममा महिलाहरू से,क्सी आवाज निकाल्ने गर्छन्। महिलाहरू यस्तो आवज त्यसवेला निकाल्छन्, जतिबेला पु,रुषहरू च,रमो,त्कर्षमा पुगेका हुन्छन्। एजेन्सी
यसरी बढाउन सकिन्छ स’म्भो’ग शक्ति (उपचार विधि सहित)